Wararka Bulshada Daily
14 shay oo Android-kaagu aanu samayn karin balse iPhone-ka shaqaalaha kula shaqeeya aanu samayn karin
by Kooxda SND 36 mins ago 30 mins ago
Raac Talooyinkan Haddii aad rabto inaad si dhakhso ah uga soo kabsato shil baabuur
Qofna marna ma filayo inuu shil baabuur galo, laakiin way dhacdaa mar kasta. Haddii aad isku aragto xaaladdan, waa...
by Kooxda SND maalin ka hor 1 maalin ka hor 1
Sidee ganacsigaagu u kasban karaa oo u ilaalin karaa macaamiisha
Ma fududa in aad noqoto milkiile ganacsi. Waxaad haysataa caqabado badan oo aad wax kaga qaban karto jidka, iyo mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn...
by Kooxda SND Maalmood ka hor 2 Maalmood ka hor 2
Sida loogu cusbooneysiiyo luqadda ganacsiga cusub
Bulshadeenu si joogto ah ayay isu bedbedeshaa iyadoo imaanshaha iyo horu marinta tignoolajiyada cusub wax walba ay bilaabaan inay si degdeg ah oo degdeg ah u socdaan, laga bilaabo hababka gudaha...
8-da Hacks ee TikTok ee ugu sarreeya si ay kaaga caawiyaan inaad hesho jacayl badan
Hordhac: TikTok waa abka warbaahinta bulshada oo caan ka helaya maalin kasta oo dhaafta. Haddii aadan horay u isticmaalin, waxaad u badan tahay inaad la yaaban tahay waxa ay tahay...
by Kooxda SND Maalmood ka hor 3 Maalmood ka hor 3
Talooyinkan waxtarka leh ayaa kaa caawin doona inaad hesho magdhow Shil baabuur ka dib
Yeroo baay’ee adda addaa adda baasuun barbaachisaa dha. Ma aha oo kaliya inaad la macaamilayso ...
by Kooxda SND Todobaadkii 1 ka hor Todobaadkii 1 ka hor
Kormeerka Farriinta Qoraalka Waalidka ee ugu Wanaagsan
Carruurta da'doodu ka yar tahay shanta sano ee helaya talefannada casriga ah, iyaga oo keligood ku daaya taleefannadooda waxay noqon kartaa khatar. Laga soo bilaabo cagajuglaynta interneedka ilaa phishingka ilaa xitaa...
Waa maxay Malware, sideese aad isaga ilaalin kartaa inaad noqoto dhibane?
Waxa laga yaabaa in aad hore ula kulantay kelmadda malware-ka laakiin aad uga fikiri wayday. Ilaa iyo inta uu jiro barnaamij ka hortag ah oo lagu rakibay...
WhatsApp ayaa ku garaacday Facebook sidii App-ka fariimaha bulshada ee ugu sarreeya, ayaa lagu yiri warbixin cusub
WhatsApp waa adeeg farimo kooxeed caan ah, sida lagu sheegay warbixin cusub, 44 boqolkiiba ayaa isticmaala ugu yaraan hal mar todobaadkii marka loo eego 35...
by Mike Stenger Todobaadkii 1 ka hor Todobaadkii 1 ka hor
Sida Magdhow Lagu Helo Kadib Joogista Dhaawacyada Daran Ee Shaqada
Haddii aad ku dhaawacantay shaqada, waxaa laga yaabaa inaad la yaabban tahay sida loo helo magdhowga dhaawacyadaada. Tani waxay noqon kartaa hab adag,...
Ilaalinta sirtaada (iyo macluumaadka xiriirka) markaad wax soo iibsaneyso gurigaaga xiga
Haddii aad guri ka iibsanayso, waad garanaysaa sida ay khibraddu u noqon karto cashuur. Waxa aad ku shubanaysaa waxa aad rabto iyo baahiyahaaga, macluumaadka ku saabsan suuqa...
by Kooxda SND Todobaad 2 ago Todobaad 2 ago
Waa maxay Dareenka Lixaad sideese loo horumarin karaa?
Bini'aadamka waxaa lagu yaqaanaa inay leeyihiin shan dareen, laakiin qaar badan oo cilmi nafsi ah ayaa ku doodaya inaan leenahay dareenka lixaad. Dadku sidoo kale waxay ugu yeeraan "dareenkayaga" ama "gut...
© 2022 Dhammaan xuquuqaha way xifdiyeen
illowday ereyga sirta ah